Izimbangela nezimpawu ze-meningitis. – Noor Health Life
Izimbangela nezimpawu ze-meningitis.
I-World Meningitis Day igujwa emhlabeni wonke ngo-Ephreli 24. Ngalolu suku kuhlelwa izingqungquthela nezingqungquthela ezahlukene zokuqwashisa ngalo mkhuhlane ukuze abantu bazi ngezimpawu, izimbangela, ukwelashwa kanye nokuvinjelwa kwalo mkhuhlane. Kulinganiselwa ukuthi umkhuhlane uhlasela abantu abangaphezu kwesigidi emhlabeni wonke unyaka ngamunye. I-Meningitis ingahlasela abantu babo bonke ubudala, kungakhathaliseki ukuthi bancane noma abadala. Ukwelashwa ngesikhathi kubaluleke kakhulu, Uma umkhuhlane ufinyelela izinga eliyingozi, ungabulala isiguli esinaleli gciwane, ngakho ukuqapha kuyadingeka.
Imvelo yenze amalungiselelo angcono kakhulu obuchopho bomuntu kanye ne-cerebellum futhi ikugcine kulwelwesi oluthathu oluyenza ivikeleke ezingozini nasezifweni ezihlukahlukene.Ngisho ukutheleleka okuncane kulezi zimbotshana kubangela izifo eziningi. Lezi zilwelwesi zingathinteka ngenxa yokulimala ekhanda, amagciwane angena egazini, izifo emakhaleni nasezindlebeni, kanye ne-meningitis.
1. Kwi-meningitis, isiguli siqale sibe nomkhuhlane omkhulu.
2. Uma ingane inalo mkhuhlane, ihlale ikhala.
3. Akukho okukwenza ufune ukudla noma ukuphuza.
4. Njengoba umkhuhlane ukhula, isiguli esithintekile siqala ukudlikizeka.
6. Ukuvilapha emehlweni kuyanyamalala.Izinkophe zinyakaza kancane kakhulu.
7.Olunye lwezimpawu ezibaluleke kakhulu ukungaguquki intamo.Intamo ayipholi kahle futhi isiguli asikwazi ukuphakamisa intamo.Ingaba yingozi kangakanani i-meningitis esikhathini esizayo?
Geneva: Umbiko okhishwe yi-World Health Organization (WHO) uveze ukuthi umuntu oyedwa kwabahlanu uzoba nenkinga yokuzwa eminyakeni ezayo ngenxa ye-meningitis nezinye izimbangela.
Ngokwemibiko yabezindaba emhlabeni wonke umbiko okhishwe yinhlangano yezempilo emhlabeni jikelele iWorld Health Organisation uveze ukuthi baningi abantu emhlabeni ababhekene nezinkinga zokuzwa.
Umbiko okhishwe yiNhlangano Yezempilo Yomhlaba
Ngokusho kwakhe ukwanda kwe-meningitis kanye nokungazi lutho ngakho kungaba kubi kakhulu ngoba i-meningitis ihlobene ngqo nokuzwa.
Ngokusho kongoti bezempilo, i-meningitis ihlasela kakhulu ubuchopho namangqamuzana ezindlebe, okwenza ukuthi umyalezo ufinyelele ebuchosheni unqanyulwe.
Ochwepheshe be-WHO bathi lesi simo esibucayi singaxazululwa kuphela ngokunciphisa umsindo ezindaweni zomphakathi nokunikeza usizo lwezokwelapha ngesikhathi.
Umbiko wokuqala wokulalelwa kwezwe okhishwe yi-WHO uthi “eminyakeni engamashumi amathathu ezayo, isibalo sabantu abayizithulu sizokwenyuka ngaphezu kuka-1.5%, okusho ukuthi umuntu oyedwa kwabahlanu uzoba nenkinga yokuzwa.” ۔
Lo mbiko uthi “ukwanda okulindelekile kwezinkinga zokuzwa nakho kungenxa yokwanda kwezibalo zabantu, ukungcoliswa komsindo kanye nezimo zabantu.”
Umbiko weWorld Health Organisation (WHO) uphinde uveze izimbangela zokungezwani nezindlebe ngenxa yokungafinyeleli kwezempilo kanye nokushoda kodokotela emazweni ahola kancane.
Umbiko uthi “amaphesenti angama-80 abantu basemazweni alolu hlobo banezinkinga zokuzwa iningi labo alikutholi usizo lwezempilo kanti amazwe anothile awalutholi usizo lwezempilo ngenxa yokwanda kwabantu.” Ngiyacela Ungathumela i-imeyili ku-Noor Health Life ngeminye imibuzo nezimpendulo. noormedlife@gmail.com